ညီလင်းသစ်: ဘိုက်ခ်တူဝပ်ခ် ...
Posted by ညီလင်းသစ် au 1.6.11
အကိုစာလေးဖတ်ပြိး စက်ဘီးစီးသင်တုန်းက ရခဲ့တဲ့ ဒဏ်ရာလေး အကြောင်းတွေးမိ၇င်း ပြုံးမိတယ်...:)
အရေးအခင်းတွေ ဖြစ်ပြီး ကျောင်းတွေပိတ်ထားတဲ့ ကာလက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အုပ်စုလိုက် ကိုယ့်မြို့နယ်ကနေ ဆူးလေအထိ ညနေတိုင်းလိုလို စက်ဘီးစီးထွက်ခဲ့ကြဖူးတယ်။
မစီးတတ်တဲ့လူဆို (ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြောတာ) တွန်းသွားရမှာဆိုတော့ မသက်လှဘူး။ မိုးရွာပါစေလို့ နင်းကန်ဆုတောင်းနေမိမလားပဲ။
အဲဒီလို စက်ဘီးအိုလေးတွေကပဲ ကျနော်တို့တွေကို ခရီးတွေ အများကြီး ရောက်စေတတ်ပြန်ရော...၊
ဟုတ်တယ် ညီမရေ၊ စက်ဘီးစီး သင်ခါစမှာတော့ ခါးကြီး စောင်းစောင်းနဲ့ လဲပြု၊ ဒဏ်ရာရတတ်ကြတာ အားလုံးလိုလိုပဲ ထင်ပါရဲ့ဗျာ..၊း)
အရေးအခင်း ကာလမှာ ကီလိုကယ်လိုရီတွေ အများကြီး လောင်မြိုက်ခဲ့ဖူးတယ် ပေါ့လေ...၊းD
အင်း.. ဒါဆိုလည်း roller skate ဖြစ်ဖြစ်၊ kick scooter ဖြစ်ဖြစ် စီးရင်ကော..၊း) နောက်ဆုံး ဘာမှ မစီးရင် လမ်းလျှောက်တာလည်း ကောင်းတာပါပဲ...နော။းD
ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူး အစ်ကိုရ ညီဆိုလေ ဆိုင်ကယ်တွေ ကားတွေထပ် စက်ဘီး ဆိုက်ကားစီးရတာကို ပိုကြိုက်တယ် ခုဆို စက်ဘီး ညနေတိုင်း စီးဖြစ်နေတာ ၆ လလောက်ကျော်ပေါ့ သင်တန်းနဲ့ အိမ်နဲ့ တစ်နေ့ကို နာရီဝက်ကျော်ကျော်တော့ စီးဖြစ်တယ် ။ ကားစီးနိုင်တဲ့သူတွေကတော့ ကားပေါ်က ဆင်းပြီး စက်ဘီးနင်းဖို့ဆိုတာ သိပ်တော့မလွယ်ဘူးနော့် တကယ်လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေကိုတော့ လေးစားတယ် ။
ကျနော်စက်ဘီးနင်းပြီး ကျနော်တွေးချင်တာတွေတွေး ငေးချင်တာတွေ ငေးရတာကို သဘောကျတယ် တစ်ခါတလေတော့လည်း ကားပေါ်ကနေ ဆဲသွားတာတို့ အတွေးလွန်ပြီး စက်ဘီးလဲတာတို့တော့ရှိတာပေါ့လေ ဒါပေမယ့်လည်းကြိုက်တယ်း))
အရင်က အလုပ်သွားရင်စက်ဘီးနဲ့ သွားတယ်။
အခုတော့ တခြားမြို့ ကိုသွားရတော့ ရထားနဲ့ ပေါ့။
တာပါ။ ရန်ကုန်မှာ ငယ်ငယ်က ကားတွေကို ကြောက်လို့ မစိးခဲ့ရဘူး။
ကိုသောမတ်စ်ရန်ကုန်မှာကျောင်းတက်တုန်းက စက်ဘီးဝယ်စီးတယ်။ ကျောင်းမှာရပ်ထားရင်းပျောက်သွားတာနဲ့စက်ဘီး
ဒီမှာတော့ ကျမတို့ စက်ဘီးပျောက်တာ ၄စီးရှိပြီ....
စက်ဘီးဆို သူငယ်တန်းကတည်းက မမကြီးစက်ဘီးယူစီးနေပြီ ဖင်ထိုင်ခုံပေါ်မမှီလည်းတက်တာပဲ
ခုတော့ ၁၃နှစ်ရှိပြီ စက်ဘီးမစီးရတာ
နောက်ကလိုက်ရင်ဖြစ်ဖြစ် ရှေ့ကလိုက်ရင်ဖြစ်ဖြစ် စက်ဘီးကို ရပ်ထားပေးမှ ရတယ်။
ဒီကိစ္စ မပြောချင်ဆုံးပါ။ တတ်နိုင်ဘူးလေ။ စက်ဘီးပို့စ်ဆိုတော့လည်း ကော်မန့်မှာဒီလိုရေး လိုက်တော့တယ်။
ဒီလှုံ့ဆော်မှု့လေးကို သိပ်သဘောကျပါတယ်။ ဒါတွေကြောင့်မို့ ဆွစ်က ပတ်ဝန်းကျင်ထိမ်းသိမ်းမှု့မှာ ထိပ်က နိုင်ငံတနိုင်ငံ ဖြစ်နေတယ်ထင်ပါ့..
ခုမှပဲ ကြားဖူးတယ် ကိုညီလင်းသစ်ရေ... ဘိုက်ခ်တူဝပ်ခ် ဆိုတာကို...။ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် အင်မတန် ကောင်းပါပေတယ်။ ဒါဆို အမလည်း ဗိုလ်ချုပ်တို့ ဂိုဏ်း ဝင်လို့ရပြီပေါ့....Happy Biking ပါ ကိုညီလင်းသစ်ရေ...:)
I wasaserious biker.My Da Da asked "When did you start riding bike",i can't recall cos i started tricycle.Then i rode bicycle with2aid wheels.His native twon is so many up and down lane and he's notagood biker:)Enjoy your biking.CHEERS!
စက်ဘီးစီးရင်း လက်စွမ်းပြထားတဲ့ ကင်မရာမန်းရဲ့ ပုံလေးတွေ ကြည့်ချင်ပါတယ်။ :D
ကျွန်မကတော့ နယ်သူမို့ စက်ဘီးကောင်းကောင်းစီးတတ်ပါ၏
အဲဒီ လှုပ်ရှားမှုလေးတော့ သဘောအကျသား
စက်ဘီးက အလုပ်နဲ့အိမ် သိပ်ဝေးသူတွေကျပြန်တော့ ဒုက္ခရောက်မယ်ထင်တယ်နော်
စက်ဘီးပြန်စီးချင်ပေမယ့် ကိုယ့်ဆီမှာက ဆိုင်ကယ်သမားက လမ်းမယူတာနဲ့ ကိုယ့်ကိုဝင်တွယ်သွားမှာကြောက်တာမို့ အသက်ဥာဏ်စောင့် လိုက်ရပါကြောင်း...
နောက်.. ရှိသေးတယ်လေ ညီရဲ့၊ မိုးရွာတုန်းမှာ ထီးတဖက်နဲ့ စီးနေရင်း စက်ဘီးလဲကျတာတို့..ဟားဟား၊ ပြောရရင်တော့ဗျာ.. စက်ဘီးစီးသူ တွေဟာ လေထုညစ်ညမ်းမှုကို ကာကွယ်သူများပါပဲ..၊ ဆက်သာ စီးပါ ညီရေ..၊း)
ရန်ကုန်က လမ်းတွေမှာ စက်ဘီးစီးဖို့က သိပ်တော့ မလွယ်တာ အမှန်ပါပဲ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ လက ကျနော်တို့ စက်ဘီး ၁ စီးလည်း ပျောက်သွားလို့ အခု ထပ်ဝယ်ထား ရသေးတယ်..၊
ဒါဆို အစောကြီး ကတည်းက စီးတတ်နေတာပေါ့၊း)
မအိမ်သူကိုလည်း ပြောလိုက်ပါ့မယ်၊ တကယ်ပေါက်လို့ ကတော့ မမေ့နဲ့နော်၊ လာဖို့ ပြင်ထားလိုက်မယ်..အဟဲ၊
ပြောသာ ပြောပါ၊ စိတ်ထဲ ဘယ်လိုမှ မထားပါနဲ့၊း) စက်ဘီးစီးတာတို့၊ ရေကူးတာတို့ ဆိုတာက လွယ်တယ်၊ ခက်တယ် ဆိုတာထက် အခွင့်အရေး ရခဲ့ဖို့သာ လိုတာပါ၊ အဆင်မပြေလို့ သင်ခွင့် မကြုံလိုက်တဲ့ ကိစ္စ တစ်ခုကို ကြုံသလို ကြည့်လုပ်သွားရုံပေါ့၊ ဟုတ်ဖူးလား၊း)
ဒီမှာလည်း ကြိုးစားနေကြတုန်းပါပဲဗျာ၊ တဖက်က ဒီလို တိုက်တွန်းမှုတွေ ရှိသလို တဖက်ကလည်း ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းမှုရဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက်တွေ လုပ်နေ ကြတုန်းပါပဲ၊ ဥပမာ- မြို့မှာနေပြီး မလိုအပ်ဘဲ4wheels drive 4x4 ကားကြီးတွေ မောင်းနေတာမျိုး...၊
သြော်..အမလည်း ဗိုလ်ချုပ်တို့၊ ဆရာ နေဝင်းမြင့်တို့နဲ့ ကလပ်ဘ် တခုထဲ အတူတူပေါ့...၊း)
Serious biker ဆိုလို့ congrats ပါ ဂျီးဒေါ်ရေ...၊ ကိုယ့်အတွက်ကော ပတ်ဝန်းကျင် အတွက်ပါ တကယ်ကောင်းပါတယ်၊ ဒါနဲ့ ၃ ဘီးက စပြီး အခု ၂ ဘီး နင်းနေတယ်ဆိုတော့ ရှေ့လျှောက် ၁ ဘီး စီးမှာလားလို့ တွေးနေမိတယ်၊ ဆပ်ကပ်တွေထဲက စက်ဘီးမျိုးလေ၊း)
မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ၊ တော်ကြာ စက်ဘီးနင်းနေရင်း ဓါတ်ပုံ ရိုက်ဖို့ လုပ်တုန်း လဲကျလို့ ကင်မရာကြီး ဂွမ်းသွားမှ ဟုတ်ပေ့ ဖြစ်နေပါဦးမယ်...၊း)
ဟုတ်တယ်ဗျ၊ အလုပ်နဲ့ အိမ် ဝေးရင်တော့ နဲနဲ ဒုက္ခ ရောက်မယ်၊ ကျနော့် အသိထဲမှာတော့ တနေ့ကို ကီလိုမီတာ ၂၀ လောက်အထိ နင်းပြီး အလုပ်လာတဲ့ သူတချို့တော့ ရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့် အနည်းစုပါ..၊
အဲဒါလည်း အမှန်ပဲဗျို့၊ စက်ဘီးစီးဖို့က စက်ဘီးလမ်း တွေ သတ်သတ်မှတ်မှတ် ထားပေးဖို့လည်း လိုတာပေါ့၊ မဟုတ်ရင် ကားတွေကြားမှာ စီးဖို့ဆိုတာက ဘယ်သူမှ လုပ်ချင်မှာ မဟုတ်ဘူး..၊
ဒီနေ့ ကျမှ ကိုယ့်ဘာသာနံမည်မရေးမိမှန်းသိတယ်။
ရေကူးကတော့ ကျွမ်းကျင်အဆင့်မရောက်တရောက်ပါ။ ။
သူတို့ အနောက်တိုင်းသားတွေ ဒီလိုကိစ္စမျိုးဆိုရင် စိတ်ပါလက်ပါ အားတက်သရော ရှိကြတယ်။ ကေအယ် မှာတုန်း က မနက်တိုင်း စက်ဘီးနဲ့ အလုပ်သွားတဲ့ အနောက် နိုင်ငံသား အဖိုးကြီးနဲ့ ခင်ဖူးတယ်။ နောက်မှ သိရတာက သူက ဂျာမန်သံအမတ်ကြီး ဖြစ်နေတယ်။ သူ့ အကြောင်းတွေ မလေး သတင်းစာတွေက ရေးကြတယ်။ သူ့ရည်ရွယ်ချက်က ၁။ ကျန်းမာရေး နှင့် ၀ါသနာ ၂။ လမ်းပိတ်ဆို့မှု မှရှောင် နိုင်ခြင်း ၃။ လေထုညစ်ညမ်းမှု့ ကိုထိမ်းသိမ်းခြင်း ၄။ လောင်စာဆီ ချွေတာခြင်း .. တွေလို့ ဆိုတယ်။
အကိုကလည်း ကင်မရာကြီးဂွမ်းသွားမှ ဟုတ်ပေ့တဲ့... လူဂွမ်းသွားရင်ကော.. ဟားဟား အကို့က ကင်မရာကို လူထက်ပိုချစ်ပုံရတယ်... ဟုတ်လား .. :P Just kidding :P
ထိုင်ဝမ်မှာလည်း စက်ဘီးနဲ့ သွားတာလာတာ တော်တော်ခေတ်စားတယ်။ ကျနော်လည်း အရင်က စီးဖြစ်တယ်။ မနက်ပိုင်း စောစောထရတာ နောက်ကျတာနဲ့ ဆိုင်ကယ်စီးဖြစ်သွားတယ်။
ပါတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတော့ လုပ်သင့်ပါတယ်။
ငယ်ငယ်က BMX နာရီနဲ့ငှားစီးတာ သတိရမိသေးတယ်။ စက်ဘီးက ဘယ်လောက် ဆွေးနေလဲဆိုရင် စီးနေရင်း ထက်ပိုင်းကျိုးသွားရော။ လူတော့ ဘာမှ မဖြစ်လိုက်ပေမယ့် အမှတ်တရတခု လို ကြုံတိုင်း သတိရမိတာပါပဲ။
သြော်..ဒီလိုလား၊း) အဲဒါကြောင့် စိတ်ထဲမှာတော့ ထင်သား၊ ကွန်မန့်ရေးပုံက ရင်းရင်းနှီးနှီး ရှိပုံပါပဲ-လို့၊း)
ကို AATO ...
အေးဗျ၊ နိုင်ငံရေး စီးပွားရေး တည်ငြိမ်လာတဲ့အခါ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး၊ လူမှုဘဝ မြှင့်တင်ရေး စတာတွေဖက် ပိုပြီး အာရုံစိုက်နိုင်တဲ့ သဘောပဲ ထင်ပါရဲ့၊ အချို့ အနောက်တိုင်းသားတွေ ကျတော့လည်း ဇိမ်ခံ ပစ္စည်းတွေကနေ ဝေးဝေးနေဖို့ စိတ်တောင် မကူးကြပါ ဘူး..၊
ဟုတ်တယ်လေ၊ လူက ပြန်ဝယ်လို့ရတယ်၊ ကင်မရာက ပြန်ဝယ်လို့ ... အာ.. ယောင်ကုန်ပါပြီ၊ ပြောချင်ဇော ကြီးသွားတယ်၊ လူက စက်ဘီးလဲရင် ခြေထောက်,ထောက်လို့ရတယ် ပြောချင်တာ....၊းD
ဟား.. ကျနော့်လိုပဲ BMX အချိန်ပိုင်း ငှားစီးသူပါလား၊ ကျနော်တို့ ငှားစီးတဲ့ ဘီးတွေလည်း အဲဒီလို ထက်ပိုင်း ကျိုးကျ မတတ်ပါပဲဗျာ၊ ဒါပေမယ့် ဒီလိုဘီးမျိုး ငှားခွင့် ရနေတာကိုပဲ ကျေးဇူးတင်နေ ရသေးတယ်..။း)
ငယ်တုန်းက စက်ဘီးစီးသင်ပေးခဲ့တာ ကိုယ့်ရဲ့  တဦးတည်းသော မောင်လေး ပေါ့ ဒူးမပြဲဘဲ စီးတတ်ခဲ့တာ သိလား ( ကြွားလိုက်ဦးမယ် ) ဒီမှာသာ စက်ဘီးစီးပြီး အလုပ်သွားရရင် သေလိမ့်မယ် ညီလင်းရေ .. ရထားစီးတာတောင် ၄၅ မိနစ်ကြာတယ် တကယ်ပြော၇ရင် စက်ဘီးစီးရတာ ကြိုက်တယ် ဒါပေမယ့် ရန်ကုန်မှာတုန်းက မြို့ထဲလမ်းတွေထဲ စီးရဲပေမယ့် ဒီမှာ မစီးရဲသေးဘူး
hi! I just saw your post on my blog. And thanks so much! I do love Burma, in fact... I wish I were Burmese. I can speakalittle, but reading... not so much. So I wish I could read your blog. Thanks for commenting!
အမလဲ စက်ဘီးစီးရတာ သဘောကျတယ်။ ငယ်ငယ်က ဗိုလ်အုန်းသီးစက်ဘီးကို နောက်က မိန့်မိန့်ကြီး ထိုင်လိုက်တတ်တာ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆိုရင်တော့ စီးမိမှာပဲ။ တယောက်တည်းဆိုရင်တော့ မသေချာဘူး။ ဒါပေမဲ့ စက်ဘီးလေးတွေကိုတော့ မြင်တာနဲ့ ချစ်မိတယ်။
ဒါဆို တော်တာပေါ့ဗျာ၊ Cheers..!!!း) စက်ဘီးစီးတာ ကောင်းပေမယ့် ကိုယ့်အသက် အန္တရာယ်ကို ထိပါးလာ နိုင်တယ် ဆိုရင်တော့ အိုဇုန်းလွှာတွေလည်း ပေါက်ကာမှ ပေါက်ရော၊ public transport ပဲ စီးတာ ကောင်းတယ်..၊း)
Thanks for your comment! Yeah..I understand what you meant. I feel also sorry for not being able to attach Google Translator directly to my post. :D
အမ မိုးချိုသင်း ...
ဗိုလ်အုန်းသီးကို နောက်ခန်းက စီးနိုင်တာ နဲနဲနောနော အခွင့်အရေးလား နော်၊ နင်းပေးမယ့် ဒရိုင်ဘာလည်း ရှိ ဦးမှ...၊းD လာလည်တဲ့ အတွက်ရော၊ ကွန်မန့်တွေ အတွက်ပါ ကျေးဇူးပါ အမရေ...။